घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू स्पेनिश फुटबल खेलाडीहरू डेभिड डी जीए बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
एलबी एक पूर्ण स्टोरी को एक फुटबल Stopper को सर्वश्रेष्ठ उपनाम द्वारा जानिन्छ; 'एडविन वान डी गी'। हाम्रो डेभिड डी जीए बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु पुरा खातामा ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर कमेन्ट डेभिड डी जी जीवनी जीवनी जो निकै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गर्न दिन्छ।
डेभिड डी जीवा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:बाल्यकाल
डेभीड डे गी क्विन्टाना जन्म भएको नोभेम्बर7को 1990th मा म्याड्रिड मा स्पेन, जोस डे जीगा (पिता), एक पूर्व लक्ष्य रक्षक र मारिआई Quintana (आमा) एक घर को रखरखाव मा स्पेन मा जन्म दिए।
उनी जन्मेका थिए जब उनको आमाबाबु उनीहरूको प्रारम्भिक 40 र उनको परिवारको एकमात्र बच्चाको रूपमा थिए।
डेभिड डी ज्याआलाई आफ्नो अमीर आमाबाबुले उठाएको थियो जसले नचाहिं आफ्नो छोरालाई लाश बनायो, तर तिनलाई उनको बच्चाको रूपमा सबैलाई दिए।
दाऊदको जवान छोराको रूपमा खेलकुदको लागि ठूलो प्रेम थियो। तथापि, तिनका आमाबाबुहरूले विशेष गरी उनीहरूले अध्ययन र खेलहरू बीच स्वस्थ सन्तुलनको बारेमा धेरै हेरे। उनीहरूले उनीहरूलाई फुटबल क्यारियरलाई राम्ररी आर्थिक स्थितिको लागि शुभ स्पेनी युवा युवा अकादमी मध्ये एकमा सुरू गर्न अनुमति दिए।
डेभिड डी जीवा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:क्यारियर सुरु
उनले ला एस्केलेला डे फुटबल एटलेटिको कासरूब्युलियस संग शुरु गरे - जो एटलेटिको म्याड्रिडसँग सम्बद्ध छन्। क्रुज, उनको पुरानो फुटबल कोच, एक पटक एक झन्झट उड्यो जसले धेरै डेभिड डी जीए प्रेमीहरूले विश्वास गर्न गाह्रो हुने थियो। उसले भन्यो, "आफ्नो युवा क्यारियरमा वर्षहरू, डेभलपमेण्ट लक्ष्यमा परिवर्तन गर्नुअघि डेभिड एक्सनको उमेरसम्म डेभिड प्लेयरमा उत्कृष्ट उत्कृष्ट खेलाडी थिए।" ओह हाँ, तपाईंले यो अधिकार पाउनुभयो !! उहाँ कहिल्यै शुरुआतमा गोल राख्ने थिएन।
यहाँ, उहाँ केवल6थियो जुन उनीहरूको टोलीसँग विशिष्ट उज्यालो कपाल कपाल लगाइएका तस्वीरहरू थिए।
डेभिड डी जी बालिका स्टोरी
दाऊदले कहिलेकाहीँ उनीहरूको स्कूल टोलीको लागि खेल्थे। तल चित्रमा स्पानीर्ड ब्याक केन्द्रले आफ्ना मिडियामा मिडफिल्डर र उपयोगिता खेलाडीको रूपमा राम्रो गुणहरू देखाए। आवश्यक भएमा उनले प्रायः सबै स्थानहरू खेलिरहेका थिए (रक्षा, मिडफिल्ड र आक्रमण भूमिका)। दाऊदले 14 उमेर सम्म एक आउटफायर खेलाडीलाई जारी राखे, उमेरले आफ्नो क्यारियरमा एक मोडलाई परिभाषित गर्यो।
डेभिड डी जी बालिका स्टोरी - शुरुआती क्यारियर दिन
6 फी4को उनको कभी बढती उचाइ उनको फुटबल को रूप मा उनको गति सीमित गर्यो। आफ्नो पिताको पादपछाडि पछ्याउन खोजेपछि युवतीले जीवनको लागि गोल रक्षकलाई पराजित गरे। Asides लक्ष्य राख्ने, डेभिड पनि बास्केटबलमा भाग लिनुभयो जहाँ उनले आफ्नो लामो उचाई प्रयोग गरे।
डेभिड डी जी - एक समय शहरमा सबैभन्दा नयाँ लक्ष्य राख्ने
डी जीवाले चौध वर्षको उमेरमा पूर्ण समयको गोलकीपरको रूपमा आफ्नो स्थिति स्थापित गर्यो। उहाँ स्पेनको सबैभन्दा ठूलो ट्राफिसी जित्नुभएको टोलीको भाग थियो। डे गीको युवा समुहमा ब्लिङ ट्राफी कैबिनेट तल चित्रण गरिएको छ।
डे गीको युवा समुहमा ब्लिङ ट्राफी कैबिनेट, ला एस्केलाले डे फुटबल एटटिको कासराब्युलियस।
डेभिड डी जीए युवा टोली ट्राफिसी
जवान गोल्फै ठूलो ठूला च्यालेन्सका लागि तयार भएको बेला, एटलेटि मैड्रिड वरिष्ठ टीममा सहभागी हुन आग्रह गरियो। यसको विशाल प्रतिभा डी डी जीएले 17 को उमेर मा एक पेशेवर अनुबंध मा हस्ताक्षर गरे।
2011 डेभलपले प्रलोभन प्रस्ताव पाएको छ कि हरेक प्रतिभाशाली खेलाडीले राम्रोसँग प्रयास गरिरहेको छ, आफ्नो क्यारियरमा आशा गर्दछ। मैनचेस्टर युनाइटेड डेभिडको नयाँ क्लब बन्यो र उनले उनलाई लामो समयसम्म सम्झौता गरे। De Gea ले पौष्टिक प्रतिस्थापन गरे एडविन भ्यान डेर सरे उनको सेवानिवृत्ति पछि। क्लबमा उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनले उपनाम 'एडविन वान डी गी '। बाक्लो भन्नाले, इतिहास हो।
डेभिड डी जीवा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य: पारिवारिक जीवन
डेभिड डी जी परिवार परिवारको पृष्ठभूमि जान्न लायक छ। सामान्यतया, उनी गोल रक्षकहरूको धनी घरबाट आउँछन्। तिनको बुबा, जोस डी जीए रेजेफेको पूर्व-बलात्कारकर्ता थिए जसले उनीहरूका सुपर बचावहरूको लागि जान्दथे। उनले पहिलो गोल रक्षकलाई 1983-84 सिजनमा उनीहरूको निर्माणको समयमा पुनःफेफेमा भर्ना गरे। दुवै जना छोरा र छोराले लक्ष्य राख्ने कार्यलाई जीवित बनाइन्। जोस, उनको बुबा, उनको उत्कृष्ट कोच हो किनभने उनी धेरै माग गर्दै छन्। Atletico मा, उनी हरेक खेलमा थिए तर वर्षा, हावा वा बर्फमा हरेक एक प्रशिक्षण सत्र पनि।
डेभिड डी जीवा को आमा, मर्वी क्विंना एक घर को रखरखाव भएको छ उनको सबै जीवन। उनी आफ्नो पतिको राम्रो हेरविचार र केवल छोरा / बच्चाको लागि सम्झना गरिन्छ। Marivi Quintana शिक्षा र खेलहरू बीचको समान संतुलनको अधिवक्ता हो। यो उनले आफ्नो छोराको लागि चाहन्थे।
जस्तै चित्रमा देखेर, आमाबाबु पहिले नै उनीहरूको 60 को हो। तिनीहरूका छोराले उनीहरूको 40 को थिए। दुवै मा बस्छन् Toledo, मध्य स्पेन मा एक शहर र नगर पालिका।
डेभिड डी जी परिवार परिवार पृष्ठभूमि
एक पटक दाऊदले सम्झाउनुभयो; "मेरो मामिले हप्तामा दुई, तीन, चार पटक बोलाउनेछ। उनले सधैं भन्थे कि मेरो बारेमा धेरै चिन्तित छ। मेरो अध्ययन र खेलहरू बीच सन्तुलनको बारेमा उनी सधैँ चिन्तित थिए। मेरो आमाबाबुले एक दिनको दिन 50km ड्राइभ गर्न बस अलार्कोको आलीशान क्षेत्रमा एटलेटिको प्रशिक्षण मैदानमा मलाई हेर्न आउनेछन् "।
सामान्यतया, आफ्नो आमाबाबुको समर्थन आफ्नो क्यारियर र व्यक्तिको लागि साधन भएको छ। तिनीहरूको प्रमुख भूमिका नजिकका साथीहरू बीचको कुरा स्पष्ट छ जुन उनीहरूलाई थाह थियो।
डेभिड डी जीवा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:सम्बन्ध जीवन
डेभिड डी जीए लेखन को समयमा अविवाहित हो। स्प्यानर्डसँग एक गम्भीर दीर्घकालिक सम्बन्धमा भनिएको छ एडर्न गारिस अल्माग्रो जो5भन्दा धेरै वर्ष भन्दा पुरानो छ।
एडर्न, एक स्पेनी गायक, एक अभिनेत्री, र टिभि प्रेन्टर जसले आफ्नो बचपन देखि सामाजिक लेखा परीक्षामा भाग लिन जान्छ।9को उमेर मा, तिनी स्पेनिश बच्चाहरु को संगीत समूह को सदस्य बने Trastos। उनीहरूले लेटेन्सन 2005 मा प्रसिद्धि गुमाए जब उनले स्पेनिश कास्टिङ शो परिचालन त्रिभुवनमा भाग लिइन् र 2006 मा छैटौं स्थानमा समाप्त भयो।
तिनीहरू अझै विवाहित छैनन् तर शायद उनी भविष्यमा यसको लागि सोचिरहेका छन्। सबैलाई थाहा छ जो ती सबैलाई राम्रो जोडे जस्तो देखिन्छ। डेडडे डी जीएले आफ्नो जीवनमा कुनै पनि केटीलाई एडर्न को बाहेक कुनै पनि मिति नदिईएको छ। उनको अनुसार
"दाऊद र म एकदमै धेरै खुसी भएँ। सधैं त्यहाँ उहाँका लागि उहाँको बावजुद प्रतिबद्धताहरू राख्ने लक्ष्यमा बाँधिएको छ। उसले अझै मेरो लागि राम्रो गुणस्तर पाउँछ। "
डेभिड डी जीए को लव स्टोरी संग एडर्न
डेभीड र एडर्नले प्रायः पार्टनर र विभिन्न स्पोर्ट्स प्रकार्यहरू सँगसँगै भाग लिन्छन्। निस्सन्देह, एक महिलाले बताउन सक्छ कि यदि एक व्यक्तिले उसलाई प्रेम गर्न इच्छुक छ कति जनाले उहाँलाई माया गर्छन्। डेभिडका लागि, एडर्नमा खर्च गरिएका पैसाहरू अर्थहीन छ। यो समय अनमोल छ बिताएको छ।
डेभिड डी जी ज्याले क्लियरफ्रन्ड एडर्नको साथ गुणस्तरको समय बिताउँछन्
Radamel Falcao, जुआन मटा, एन्टोन ग्रिजमन र रबर्ट लुवेन्डोस्की डेभिड डी गी जस्तै यस्तै प्रेम कथा भएको छ।
डेभिड डी जीवा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:आँखाको दोष
डेभीड डे जीका उच्च हाइपियोपिया छ, जुन अर्थको लागि मध्यस्थ शब्द हो। यो एक साधारण प्रकार को अप्ठ्यारो त्रुटि हो जहाँ दूर वस्तुहरु नजिकै को वस्तुहरु भन्दा अधिक स्पष्ट देखि देखिन सक्छ।
स्प्यानरर्डले आफ्नो जीवन बाहिर चम्किलो चश्मे छ र सम्पर्क लेन्स पहें
डेभिड डी जीएको आँखाको दोष- किन उनी सम्पर्क लेंस पहन्छन्
उनको क्यारियर प्रदर्शन कहिल्यै पुष्टि भएको छैन।
डेभिड डी जीवा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:उनको सुपर एजेन्ट
जर्ज पाउलो अगोस्टेन्नो मन्डेस (जन्म7जनवरी 1966), राम्रो तरिकाले सजिलै संग जर्ज मेन्डेस डेभिड डी जीए एजेन्ट हो।
डेभिड डी जीएको एजेन्ट- जोर्जे मेन्डेस
Mendes विश्वका सबैभन्दा प्रभावकारी फुटबल एजेन्सीहरू छन्, ग्राहकहरू सहित क्रिस्टियानो रोनाल्डोडेविड डी गी, डिएगो कोस्टा, जेम्स Rodríguez, र जोसे माउन्टेन. Mendes लाई प्रायः "सुपर एजेन्ट" भनिन्छ। उनीसँग 102 अन्य फुटबलरहरू ग्राहकको रूपमा छन् र $ 1 बिल को योगफलको अनुबंध संभाला गरेका छन्।
डेभिड डी जीवा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:उसको गाडी
डेभीड डी जीवा शेभ्रोलेट ($ 50.000) द्वारा बनाईएको क्याप्टिभ एसयूवी चलाउँछ।
डेभिड डी जीवा के शेवरले
विपरीत Raheem Sterling, त्यो कारहरु को बेड़े, सप्ताह को प्रत्येक दिन को लागि एक प्रयोग गर्न को लागि प्रयोग गरेन। डेभिड एक साधारण मानिस हो जुन उहाँको संग धेरै सहज छ शेभ्रोलेट क्याप्टिभ.
डेभिड डी जीए को शेवरले कैप्टिवा कार
डेभिड डी जीवा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:उसको घर
डेभिड डी जीवाको घर पाउन्ड 2.75m मा मूल्यवान छ। चित्र तल उल्लेखित छ।
डेभिड डी ज्या हवेली
डेभिड डी जीवा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:उहाँको सबैभन्दा पुरानो मित्र
डेभिडको सब भन्दा पुरानो साथी भन्दा अर्को व्यक्ति होइन Kun Aguero.
डेविग डे जीका पुरानो मित्रता कुनु अगुरोसँग
उहाँसँग साँच्चै राम्रोसँग भेट्नुभयो Kun एथेट्टिको मैड्रिडमा उनीहरूको समयको दौडान। दुबै कोठा सँगै एकै ठाउँमा साझेदारी गरियो। किनभने तिनीहरू फरक घरहरू भाँडामा लिन सक्दैनन्, तर तिनीहरूका बीच नजिकको मित्रताको कारणले।
डेभिड डी जीए सबैभन्दा पुरानो क्यारियर मित्र
त्यसपछि एथलेटिको मा फिर्ता, जब डेभिले क्रूस समात्न थाले, उसको पहिलो प्रकोप एक छिटो पास वा सेट गर्न फेंक हुनेछ Kun उनको टोलीका कुनै साथी पिचमा टाढा छ।
डेभिड डी जीवा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:कपाल शैली
डेभिड उनको अतिरिक्त साधारण मोहोक केश को लागि पनि प्रसिद्ध छ।
डेभिड डी गी हेयर स्टाइल
प्रत्येक पक्षबाट पूर्ण रूपमा मुछिएका बालहरू भनेको केहि चीज हो जसले मैनचेस्टर संयुक्त प्रशंसकको साथ डेभिड डी गीलाई धन्यवाद दिन्छ। यो अधिक उत्पत्ति प्रतीत हुन्छ कि पावल पोग्बा को पछि निम्नानुसार यस मैनचेस्टर युनाइटेड फ्यानले सुझाव दिन्छ।
मैनचेस्टर युनाइटेड फ्यानले डेभिड डी गीको केशको प्रतिलिपि बनाउँछ